ၾကားသိရသမ်ွ – Thazin Media
ထားရစ်သွားတဲ့ ချစ်သူနောက်ကို အမီပြေးလိုက်ရင်း အမောဆို့ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူ
Thazin Media August 20, 20190Comments 0
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ဆာရာဝက်ပြည်နယ်မှာ ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေးတို့ အချင်းများ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးသားကတော့ အသက်(၃၅)နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီး၊ စီးဘူးမြို့သားပါ။ သူ့အမည်မှာ Yung Fei Kong လို့ သိရပြီး၊၊ ကောင်မလေးကတော့ (၂၇)နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ မနက်(၈)နာရီလောက်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချင်းများခဲ့ကြပါတယ်။ ကောင်မလေးက စိတ်ဆိုးပြီး ဖိနပ်တွေကိုချွတ်ကာ Yung ကို ထားရစ်ခဲ့ပါတယ်။ Yung…
အဖြစ်ဆိုးလှတဲ့သမီလေး နှင်းရတီထွန်း (မိဘချင်းကိုယ်ချင်းစာ၍ရေးသည်)
Kwee Zaw August 20, 20190Comments 0
နှစ်စဉ်ကျောင်းမှာ ပထမဆုခဏခဏချိတ်လို့ မိဘဆရာတွေက အချစ်ပိုခဲ့ရတဲ့ သမီးလေး နှင်းရတီထွန်း လက်ရှိ Novel ပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှာ ၇တန်းတက်နေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့အထိ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ကျောင်းတက်ဆော့ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ သမီးလေး ၁၈.၈.၂၀၁၉ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၆ နာရီစပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ သူ့ဘဝလေးထဲ ဂြိုလ်ဆိုးစဝင်ခဲ့တယ်လို့ဘဲ ဆို ပါရစေတော့ ဖြစ်စဉ်ကဒီလို သမီးလေးရဲ့ရင်သားမှာ အကြိတ်လေးတွေ့လို့ မန္တလေးမြို့ရဲ့…
စနှိုက်ကြော်ခံလိုက်ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဖတ်ဖို့
ချစ်သူက လောလောလတ်လတ် စွန့်ပစ်သွားတဲ့ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေရသလား … ? ဒါမှမဟုတ် ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်က စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ချစ်သူကို စိတ်မကုန်သေးဘူးလား … ? နောက်တစ်ယောက်တွေ့လို့ သင့်ကို ထားသွားတာလား … ? အဲဒီလိုအခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြုချင်ပါတယ်။ (၁) သင့်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး ချစ်သူက သင့်ကို…
အပျော်အပါး ခုံမင်တဲ့ ယောကျာၤးတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်များ
မိန်းကလေးတွေက အပျော်အပါး ၊ အပေါင်းအသင်းမက်တဲ့ယောကျာ်းမျိုးကို အိမ်ထောာင်ဖက်အဖြစ် မရွေးကြဘူး။ ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက် ၊ အပျော်အပါးပဲမက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အချစ်ရေးမှာရော ၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာပါ အခြေအနေမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ သင့်ချစ်သူက အပျော်အပါးမက်သူလားဆိုတာ ဒီအချက်တွေကနေ သိသာနေမှာပါ။ အပျော်အပါးပဲမက်နေတဲ့ယောကျာ်းက သင့်အတွက် အချိန်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့ သင့်ပျော်ရွှင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (၁) အပေါင်းအသင်းက ပထမ အပျော်အပါးမက်တဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေ တော်တော်များများ အပေါင်းအသင်း…
မွန်မြတ်လှတဲ့ သိန်း ၉၀၀တန် ကားအလှူရှင်
ဒီနေ့ ကျွန်တော် အပျော်ဆုံးနေ့လေး ဖြစ်မိတာကို မိတ်ဆွေတွေကို မျှဝေပါရစေ။ ကျွန်တော် ဒီ SURF ကား ၃ခ /၃၈၇၂ အပြာရောင်လေးကို ၂၀၁၁ ခု နှစ်ကတည်းမှ သိန်း ( ၉၀၀ ) ကျော် ပေးပြီး အမြတ်တနိုး စီးလာခဲ့ တာ အခုချိန်ထိပါပဲ။ ဒီနေ့တော့ ကံအကြောင်း တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ဘုန်းဘုန်းက…
ရုပ်ရည်ချောမောလွန်းသူတွေဟာ အချစ်ရေးမှာ အဆင်မပြေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
ရုပ်ရည်ချောမောလှပတာဟာ ကောင်းကျိုးတွေချည်းနဲ့ ပြည့်နေလိမ့်မယ်လို့ တော်တော်များများက ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေမယ်၊ လူတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေမယ်၊ ငွေရှာလည်း ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အရမ်း်လှတဲ့သူတွေတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ပြသနာလေးတွေကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ သုတေသန ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ အချစ်ရေးမှာလည်း ရေရှည်မှာအဆင်မပြေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသတဲ့။ Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အရမ်းလှလွန်းတဲ့သူတွေဟာ ခဏခဏ အသည်းကွဲရပါသတဲ့။ အကြောင်းကတော့ ချစ်သူက သဝန်တိုတာတွေ၊…
မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က ရေဘေးကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အိမ်တွေကို ပြန်ဆောက်ပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပြီ
Thazin Media August 14, 20190Comments 0
လတ်တလော မုတ်သုန်အားကောင်းပြီး နေရာဒေသတော်တော်များများမှာ မိုးများ အဆက်မပြတ် ရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ ဒေသတွေထဲမှာ မှ မွန်ပြည်နယ်ကတော့ ရေကြီး ရေလျှံမှုနဲ့ မြေပြိုမှုတွေကြောင့် အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူအသေအပျောက်ပင် ၆၅ ဦးကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခေအြနေမှာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရော ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွေရော ၊ တပ်မတော်သားတွေပါ တက်ညီလက်ညီ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့…
Thazin Media August 13, 20190Comments 0
တနသာၤရီမြိုနယ့် ညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် ရေစီးနဲ့အတူ မျောပါသွားသော တနသာၤရီမြိုနယ့် ညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် တပ်မတော်သားတစ်ဦးမှ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ အန္တရာယ်ကင်းအောင် လမ်းကြောင်းပြပေးနေရင်း လမ်းအဖြတ်တွင် ၄ပေခန့်အမြင့်ရှိ ရေစီးနှင့်မျောပါကာ ပြည်သူ့အတွက် အသက်ပေးလှူသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ တနသာၤရီမြို့နယ် မြန်မာ့တပ်မတော် တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် တပ်မတော်သားတစ်ဦးရေနစ်သေဆုံး 12.8.2019 တနင်္သာရီမြို့နယ် ၊ ညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့၊နေ့လယ် ၁ နာရီခွဲခန့်က…
မွန်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအား တပ်မတော်သားများမှ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ
Thazin Media August 12, 20190Comments 0
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေဘေး အန္တရာယ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ကျောင်းရွာ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စု ၄၂ စု၊ လူဦးရေ ၂၂၇ ဦးတို့ကို ဘာကေသရဟံသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရေဘေး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ လည်းကောင်း၊ ဟံဂံကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စု ၂ဝဝ စု၊ လူဦးရေ ၅ဝ၂ ဦးကို အသောကရာမဘုန်းကြီးကျောင်း ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ လည်းကောင်း၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်နှင့်…
ရေးမြို့သို့ ပြည်မြို့က အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ကား ၅ စီး ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် စတင် ထွက်ခွါသွားပါပြီ.
ရေးမြို့သို့ ပြည်မြို့က အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ကား ၅ စီး လူအင်အား ၂၃ ဦးဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ညနေ ၆:၀၀ ကစတင် ထွက်ခွါသွားပါပြီ… အခုလိုက်ပါသွားသူများဟာ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး အထူးလေ့ကျင့်ပြီးသားသူများကိုသာ ကြိုတင်စေလွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်… အခုရက် အလှူခံရရှိမှူတွေ ပြီးရင် ၁၆-၈-၁၉ ရက်နေ့ည နောက်ထပ် ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကိုထပ်မံစေလွှတ်သွားပါမည်။ Credit: ညီညီအောင် ပြည်